Cristiano Ronaldo oo Juventus ku cadaadinaya inay la soo saxiixato xiddig ka tirsan Real Madrid – Gool FM
(Turin) 13 Sebt 2020. Wargeysyada Spain ayaa maanta oo Axad ah waxay shaaca ka qaadeen arrimo cusub ee ku saabsan suuqa kala iibsiga ee kooxda Juventus.
Warbixino hore loo daabacay ayaa lagu sheegay in ciyaaryahanka reer Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Marcelo ay suurtogal tahay inuu ka tago garoonka Santiago Bernabéu xagaagan.
Haddaba sida laga soo xigtay shabakada “Defensa Central” ee dalka Spain xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa ku cadaadiyay saraakiisha kooxda Juventus inay la soo saxiixdaan daafaca reer Brazil ee Marcelo.
Cristiano Ronaldo ayaa xiriir wanaagsan la leh Marcelo tan iyo wadajoogoodii garoonka Santiago Bernabéu, wuxuuna doonayaa in markale ay iska garab ciyaaraan.
Shabakadda ayaa tilmaamtay in tababaraha kooxda Juventus ee Andrea Pirlo uu sidoo kale cadaadis ku saarayo maamulka Bianconeri in la sameeyo heshiiska Marcelo.
Balse wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan inay adag tahay in madaxweynaha kooxda Real Madrid uu ogolaado dalab kasta ee laga soo gudbiya Marcelo si ay u fasaxaan, laakiin Juventus ayaa isku dayaysa inay qaado talaabo kasta si ay u hesho adeega xiddigan reer Brazil.